Imibuzo evame ukubuzwa - Xiamen Joint Tech Co., Ltd.
Ngingayikhokhisa kuphi imoto yami?
Ekhaya egalaji / emgwaqeni wangasese, noma endaweni yokupaka ekhethiwe / indawo yokupaka okwabelwana ngayo (ejwayelekile kumafulethi).
Emsebenzini endaweni yokupaka izimoto esakhiweni sehhovisi lakho, kungagcinelwa umphakathi noma (semi) umphakathi.
Emphakathini emigwaqweni, emgwaqeni omkhulu, nakunoma iyiphi indawo yokupaka yomphakathi ongacabanga ngayo - isib. Izinxanxathela zezitolo, izindawo zokudlela, amahhotela, izibhedlela njll. Ukuthi uyakwazi ukufinyelela kuzo zonke iziteshi zokushaja zomphakathi kuya ngokuthi ikhadi lakho lokushaja liyasebenzisana yini. Uma "ukusebenzisana" kwenziwa kwasebenza, unamandla okukhokhisa kubahlinzeki beziteshi ezahlukahlukene zokushaja.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukushaja imoto yami?
Izikhathi zokushaja ziyahlukahluka kuye ngokuthi: izinga lakho lamanje lokushaja ibhethri, umthamo webhethri lakho, umthamo wesiteshi sakho sokushaja namasethingi, kanye namandla omthombo wamandla wesiteshi sakho sokushaja (isb. Ukuthi kusekhaya noma esakhiweni sehhovisi).
Ama-hybrids we-plug-in adinga amahora angama-1-4 ukuthi akhokhiswe ngokugcwele, kanti izimoto ezigcwele ugesi zidinga amahora we-4-8 (kusuka ku-0 kuye ku-100%). Ngokwesilinganiso, izimoto zimile ekhaya amahora angafika kwayi-14 ngosuku, nasemsebenzini amahora angama-8 ngosuku. Ngesiteshi sokushaja onaso, sonke lesi sikhathi ungasisebenzisa ukufaka imoto yakho ku-100%.
Indawo kagesi ejwayelekile: Xwayiswa uma ukhokhisa i-EV yakho endaweni kagesi ejwayelekile. Ukushaja ekhaya kungadinga ikhebuli yokushaja ethize evimbela ukunqamuka kukagesi nokushisa ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, kuzodingeka futhi uqiniseke ukuthi indawo eseduze nemoto yakho iseduzane, njengoba ungaze usebenzise ikhebula lesandiso ukushaja imoto yakho. Kodwa-ke noma kuthathwe lezi zixwayiso, ukushaja okuvela endaweni ejwayelekile kudikibala kakhulu, njengoba izakhiwo eziningi zokuhlala zingenazintambo zokuthwala ugesi ophakeme. Izikhathi zokushaja zizoya ngokuthi ukuliphi izwe. Nge-EV enebanga elingamakhilomitha ayi-160, ungalindela isikhathi sokushaja cishe samahora angama-6-8 eYurophu.
Isiteshi sokushaja i-EV: Le yindlela enconyelwa kakhulu yokushaja imoto, ngoba yenza iphephe futhi isebenze kahle imithombo yakho yamandla nemithombo yamandla (isb. Indlu noma isakhiwo sehhovisi). Ngesiteshi sokushaja onaso, ngaso sonke isikhathi lapho ufika emgwaqeni uqinisekile ukuthi unemoto egcwele ngokugcwele enebanga eliphezulu. Isiteshi sokushaja singashaja kuze kube kasishiyagalombili kunesitolo esivamile. Lokhu kusho ukuthi noma iyiphi i-EV izokhokhiswa i-100% ngamahora we-1-4 kuphela. Thola ukubuka konke kwezikhathi zokushaja zamandla webhethri ajwayelekile lapha.
Isiteshi sokushaja okusheshayo: Iziteshi zokushaja okusheshayo ziyavela kaningi ngaphandle kwamadolobha nasemigwaqweni emikhulu. Yize ishesha (ishaja ngemizuzu engama-20-30), ishaja esheshayo ejwayelekile iletha i-EV kuze kufike ku-80% ngesikhathi sokushaja esisodwa. Ngenxa yemishini ebizayo kanye nehardware yeziteshi zokushaja okusheshayo, lawa mashaja ngokuvamile athengwa kuphela futhi akhiwe ngokwesicelo ngasinye ngohulumeni basekhaya.
Uhlobo luni lwesiteshi sokushaja okufanele ngilufake?
Kunezinhlobo eziningi zeziteshi zokushaja - kufaka phakathi i-Level 1, Level 2 ne-DC Fast Charging - ngakho-ke leyo oyikhethayo izoncika ezintweni eziningi. Lokhu kufaka phakathi amacala okusetshenziswa kwamakhasimende alindelekile, izindleko nezakhiwo zokwakhiwa kwamasayithi.
Yiziphi izinto zokwakhiwa kwesayithi ezithinta izindleko zokufaka?
Izindleko zokufaka isiteshi sokushaja zingadlula izindleko zehadiwe uqobo futhi zithonywe yizinto eziningi zokwakha okufanele zicatshangelwe njenge:
Insizakalo kagesi etholakalayo njengamanje. Konke ukufakwa kwesiteshi esishajaja okusha kufanele kwenziwe ukuhlaziywa komthwalo okwenziwe ngokufunwa ugesi kwesikhungo ukuthola ukuthi kukhona yini umthamo wokungeza iziteshi zokushaja ze-EV. Iziteshi ze-AC Level 2 zizodinga isekhethi elizinikele lama-240-volt (40 amp) kanye nokwenza ngcono inkonzo kagesi kungadingeka.
Ibanga phakathi kwephaneli kagesi nesiteshi sokushaja. Ibanga elide phakathi kwephaneli kagesi nesiteshi sokushaja i-EV kusho izindleko zokufaka eziphakeme ngoba kwandisa inani lokudonsa (nokulungisa) okudingekayo, umsele, nocingo. Kuyinto efiselekayo ukunciphisa ibanga phakathi kwephaneli kagesi nesiteshi sokushaja i-EV ngangokunokwenzeka ngenkathi ucubungula nendawo yesiteshi sokushaja esakhiweni.
Indawo yesiteshi sokushaja esakhiweni. Cabanga ngomthelela wokubeka isiteshi sokushaja endaweni ethile esakhiweni. Isibonelo, ukubeka izindawo zokupaka iziteshi ezishaja ngemuva kwesakhiwo kungakudikibalisa ukusetshenziswa kwazo, kepha amanye amakhasimende angaphatheka kabi uma kufakwa isiteshi sokushaja ezindaweni zokupaka eziphambili ezihlala zihlala zingenamuntu ngoba kunabashayeli be-EV abambalwa.
Okunye ukucatshangelwa kunomthelela omncane kuzindleko zokufaka kepha kungathinta ukuthi sisebenza kanjani isiteshi ekuzuzeni abashayeli be-EV namanye amaklayenti. Ezinye zazo zibandakanya indlela intambo yokushaja ethatha ngayo lapho isetshenziswa kanye nemikhuba yokuphatha indawo yokupaka.
Ngingakwazi ukukhokhisa abantu ngokusebenzisa isiteshi sami sokushaja?
Yebo, uvunyelwe ukukhokhisa abantu ngokusebenzisa isiteshi sakho yize abanikazi beziteshi abaningi bekhetha ukunikeza ukushaja mahhala njengokuyenga noma inzuzo. Isibonelo salokhu umqashi onikela ngokukhokhiswa kwamahhala kubasebenzi namakhasimende abo. Uma uthatha isinqumo sokukhokhisa ngokusetshenziswa kunezici eziningi okufanele uzicabangele ekunqumeni ukuthi yini ekusebenzela kangcono.
Ukushaja ukusetshenziswa kuncike endaweni. Isinqumo sakho sizoya ngokwengxenye yendawo lapho sisebenza khona. Kwezinye izindawo zeNew York State, ikakhulukazi emadolobheni amakhulu, amanye amagaraji akhokhisa ukupaka angathola amaklayenti azimisele ukukhokha okwengeziwe ukukhokhiswa kwe-EV njalo ngoba awanawo amandla okukhokhisa lapho ehlala khona.
Ukushaja ukusetshenziswa kuya ngenhloso yokufaka isayithi. Inzuzo eyenziwe yilesi siteshi akuyona kuphela ithuba lokwenza imbuyiselo yotshalo-mali esiteshini sokushaja. Iziteshi zokushaja zingaheha abashayeli be-EV ababuye baphathe ibhizinisi lakho, bagcine abasebenzi ababalulekile, noma banikeze umuzwa wokuphatha kwakho kwemvelo okungasiza ukuheha abahlali be-EV nabangewona ama-EV, abasebenzi noma amakhasimende.
Kushaja kanjani ukusetshenziswa. Abanikazi beziteshi bangakhokhisa ngokusetshenziswa ngehora, ngeseshini ngayinye, noma ngeyunithi ngayinye kagesi.
Ngehora: Uma ukhokhisa ngehora, kunezindleko ezibekiwe zanoma iyiphi imoto ukuthi iyashaja noma cha, futhi izimoto ezahlukahlukene zithola ugesi ngamanani ahlukile, ngakho-ke izindleko zamandla zingahluka kakhulu ngokushaja iseshini.
Isikhathi ngasinye: Lokhu kuvame ukufanelekela ngokwengeziwe ukushaja noma ukushaja iziteshi zomsebenzi ezinezikhathi ezifushane kakhulu, ezijwayelekile.
Ngeyunithi ngayinye yezamandla (imvamisa i-kilowatt-hour [kWh]): Lokhu kubiza ngokunembile izindleko zangempela zikagesi kumnikazi wesiteshi sokushaja, kepha akunikezi isikhuthazo semoto ekhokhiswe ngokuphelele ukushiya isikhala
Abanye abanikazi besayithi bazamile ukuhlanganiswa kwalezi zindlela, njengokushaja isilinganiso esiphansi samahora amabili okuqala, bese kuba nesilinganiso esikhulayo sezikhathi ezinde. Ezinye izindawo zingancamela ukwehlisa izindleko zazo zokusebenza ngokungajoyini inethiwekhi yesiteshi sokushaja nokunikela ngokukhokhiswa mahhala.
Kungani ukushaja emsebenzini kubaluleke kangaka?
Njengoba abantu abaningi beshayela beya emsebenzini futhi abashayeli be-EV bathanda ukukhokhisa imali yabo noma kunini lapho kunokwenzeka khona ukunikeza ukushaja emsebenzini kuyinzuzo enkulu yomsebenzi abaqashi abangayinikela. Eqinisweni, ukushaja emsebenzini kungafinyelela kubasebenzi abaphindwe kabili i-EV lonke ugesi lokuhamba nsuku zonke. Kubaqashi, ukushaja ezindaweni zokusebenza kungasiza ekuheheni nasekugcineni abasebenzi abasebenzayo futhi kukhombise ubuholi ekwamukeleni ubuchwepheshe obuhlanzekile bamandla.
Incwajana Yokushaja Yasemsebenzini ye-NYSERDA [PDF] inikeza ukubukwa konke kwezinzuzo zokufaka iziteshi zokushaja ezindaweni zokusebenza nokuholwa enqubeni yokuhlela, ukufaka nokuphatha ingqalasizinda ye-EV
UMnyango Wezamandla Ukushaja Emsebenzini isiza sinikeza umhlahlandlela wokubandakanya abasebenzi ukuze basebenzise le nzuzo, kanye nemininingwane eningiliziwe yokuhlola, ukuhlela, ukufaka nokuphatha ukushaja endaweni yokusebenza
Yiziphi iziteshi ze-DC ezishaja ngokushesha?
Ukushaja okusheshayo kweDC kusebenzisa ukudluliswa kwamandla okuqondile (DC) okuqondile kanye nokokufaka okungama-480-volt okushintshayo kwamanje (AC) ukuhlinzeka ngokuvuselelwa okusheshayo ezindaweni ezisetshenziswa kakhulu zokushaja umphakathi. Ngokuya nge-EV, iziteshi zokushaja okusheshayo ze-DC zinganikeza ngokuvuselelwa okungu-80% ngemizuzu engama-20 nje kuphela. Isivinini sokushaja sincike kusayizi webhethri yemoto nasekushajeni i-hardware, kepha ama-EV amaningi manje angashaja ngaphezu kwe-100 kW (ngaphezu kwamamayela ayi-100 ebangeni ngemizuzu engama-20). Ukushaja okusheshayo kwe-DC ngokuyinhloko kuyinketho ye- konke-kagesi izimoto. Ambalwa ama-EV e-plug-in hybrid angasebenzisa amashaja asheshayo we-DC. Kunezixhumi ezintathu eziyinhloko zamashaja we-DC asheshayo; Ama-EVs angasebenzisa amashaja asheshayo we-DC ahambisana kuphela nokunye kokulandelayo:
Uhlelo Lokushaja Oluhlanganisiwe lwe-SAE (CCS) indinganiso yokushaja eyamukelwa kabanzi esetshenziswa iningi labenzi bezimoto
CHAdeMO indinganiso ejwayelekile yokushaja esetshenziswa kakhulu yiNissan neMistubishi
Inethiwekhi yeTechlager Supercharger kusekelwe kubuchwepheshe bokushaja obunikazi obungasetshenziswa kuphela yizimoto zikaTesla uqobo
Izinkampani eziningi zikahulumeni nezizimele zakha iziteshi eziningi zokushaja eNew York State nakwamanye amazwe, kufaka phakathi iNew York Power Authority, i-Electrify America, i-EVgo, iChargePoint, iGreenlots, nokuningi.